Refugee Travel Document iyo Xuquuqda Safarka | USAHello | USAHello
aad tahay qaxooti ama asylee? Ma u baahan tahay in ay u safraan meel ka baxsan Maraykanka? Waxaad u baahan doontaa a Travel Document Refugee si ay u soo celi USA. qaxootiga iyo magangelyo doone waa Most isticmaali kartaa a Travel Document Refugee safarka meel ka mid ah baasaboor.
Qofka qaba qaxootiga ama magangelyo xaaladda raba in ay u safraan meel ka baxsan USA waxay u baahan tahay a Document Refugee Safarka. Aan dokumentigan, laga yaabaa in aadan xaq u leedahay inaad dib u soo gasho Mareykanka iyo aad waxaa lagu qori karaa in lagu hayo ama socdaalka maxkamadda.
Document Travel Qaxootiga u eg baasaboor iyo waxaa loo isticmaali karaa sida mid ka mid ah. Si kastaba ha ahaatee, qaxooti ahaan, fadlan la fahmo in ilaa aad tahay muwaadin Mareykan ah, waxaa jira qaar ka mid ah khatar u safrin meel ka baxsan USA, sababtoo ah waxaad waayi kartaa xaaladda. Waxaa laga yaabaa in sababta aad u fiican in ay u safraan meel ka baxsan Maraykanka. Laakiin waxaa muhiim ah in aad ogaato oo ku saabsan caqabadaha iman kara socdaalka ku lug.
Sidee ayaan u codsadaa a Document Refugee Travel?
Si aad u codsato a Document Refugee Travel, aad u baahan tahay si aad u gudbiso Foomka I-131, Codsiga Document Travel. Si aad u gudbiso foomka, fadlan si taxadir leh u akhri tilmaamaha si ay u dhamaystiraan Foomka I-131. Buuxinta foomamka sharci noqon karaan kuwo lagu wareero, xataa dadka u dhashay dalka Maraykanka. Haddii aad u baahan tahay inaad buuxiso foom sharci ah, waa fikrad wanaagsan inaad caawimaad ka hesho hay'adda dejinta. Iyadoo ku xiran halka aad ku nooshahay, waxaad yeelan doontaa in ay soo diri foomka cinwaan kale. Hubi in aad waxaad foomka u dirtaa cinwaanka saxda ah.
Ma lacag si ay u soo gudbin dokumenti safar?
Haa. Iyadoo ku xiran da'daada, waxaa laga yaabaa inaad bixiso lacag ah labada foomka oo aad astaan (faraha iyo sawiro). Waxaa laga yaabaa in aad awoodid in aad codsato kacafis lacag haddii aad muujin kartid dhibaato dhaqaale.
Waxaan soo gudbin karaa a Form I-131 for a Travel Document Refugee ka dib markii aan ka tago Maraykanka?
Waa in aad gudbiso a Form I-131 for a Travel Document Refugee ka hor inta aadan ka tegin Maraykanka. Haddii aadan soo gudbin for a Travel Document Refugee ka hor inta aadan ka tegin Maraykanka, waxaad waayi kartaa xaaladda qaxootinimo ama ay ku adag tahay in ay soo socda Maraykanka dib. Waxaad codsan kartaa oo keliya haddii aad ka baxsan Maraykanka ka yar 1 sano waqtiga jeestay in codsigaaga. Si kastaba ha ahaatee, ma waxaad u qaadan karnaa in xafiis dibada aqbali doono codsigaaga haddii, waxaa iska cad aad gudbiyay kartaa Foomka I-131 ka hor inta aadan ka tegin Maraykanka.
Haddii aan xeraysid foomka I-131 si aad u hesho a Travel Document Refugee halka aan ahay oo dalka Mareykanka ah, USCIS diidi doonaa Form I-131, haddii aan ka tago United States, halka foomka waxaa weli laga gaarin?
Inkastoo USCIS ku talinaysaa in aad gudbiso Foomka I-131, halka aad ku sugan tahay Maraykanka, looma baahna inaad joogo dalka Mareykanka si loo ansixiyo ah iyo arrin of a Travel Document Refugee ahaan haddii aad gudbisay astaan (sawir, farahaaga).
Ma u safri karaa dib u dalka halkaas oo aan la kulmay cadaadis la soo dhaafay ama sheegan cabsi cadaadis mustaqbalka?
In qaar ka mid ah xaaladaha gaarka ah, aad ku noqon karto wadanka aad ka cararay. Tusaale ahaan, haddii xubin ka mid ah qoyska dhow xanuunsan yahay ama uu ku dhintay, waxaa laga yaabaa inaad xaq u leedahay inuu ku soo laabto dalka aad ka soo jeedo. Laakiin haddii aad tahay asylee ama qaxooti iyo soo laabashada meeshii aad sheegtay in laga ilaaliyo, laga yaabaa inaad lumiso xaaladda magangalyada.
Haddii aad u baahan tahay inuu ku soo laabto dalka aad ka tagtay, waxaanu kugula talinaynaa in marka hore aad la hadashid hay'adda dejinta ama qareen.
Wixii faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan Refugee Travel Document iyo Form I-131, waxaad ka akhrisan kartaa ama kala soo bixi this macluumaadka USCIS. Sidoo kale fadlan akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan xuquuqda aad qaxooti ahaan.